トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Hubi xawaaraha bedelka of Xintai qowladda pachinko ah
waqti in qowladda pachinko a Beri baa u eg tahay dhacdo weyn oo ka hadlayay bedelka Xintai, waxa ay aheyd wixii dhacay xawaaro ah oo ku saabsan hal hal ama dhowr bilood bishii. Currently ma jiraan wax isbedel ah ee dhacdooyinka muhiimka ah si ay u soo jiitaan macaamiisha, laakiin inta badan waxa uu noqday noqnoqda ah oo ku filan oo aan la barbar dhigo. mid ka mid ah xeerarka SFIga Waxaa kaloo jira way qabsadeen, laakiin xawaaraha si ay u qabtaan bedelka Xintai ah, shuruudaha goobta iyo macaamiisha saldhig, kala duwanaan doona xaaladaha ganacsiga ee pachinko. Isagoo ka hadlayay xaaladaha goobta
, in qowladda pachinko in qowladda pachinko iyo hore ee saldhigga aagga hoose ee ah, bedelka Xintai ayaa lagu fuliyay toddobaad kasta. Sababta tani waa in, in aagga magaalada hoose iyo hore ee idaacadda, idin soo bixinay waa in tartan lagu waday inuu tii pachinko yihiin ayaa noqday xoog. Xintai, waxa ay noqotay badeecad aad u muhiim ah si ay u soo jiitaan macaamiisha. xaafadda
qowladda pachinko waa, haddii hordhaca ah ee ku dayashada caanka ah ee u tiro badan, waxay noqon doontaa xaaladda lama huraan ah inuu dhaco ama in badan oo socda. Si looga hortago xaaladda, waxa ay la soo horjeeda by bandhigid dhiganta tiro ay tirada hordhaca ah ee dukaamada xaafadda helay warbixin ka soo saarayaasha ugu. In qowladda pachinko ee badhtamaha magaalada, xeeladaha sida lagu fuliyay toddobaad kasta, waxaan xawaaraha of bedelka Xintai waxaa uu noqday si dhakhso badan oo ka Si aad u.
Si kastaba ha ahaatee, mashiinka pachinko noqon doona boqolaal kun oo yen per mid. Si aad u bedelan Xintai ah, waxa ay u kharash badan qaadataa. ayaa si deg deg ah Marka aad soo bandhigay 10 cutub, waxa uu noqon doonaa unug malaayiin yen.
, xaqiiqada ah in ku timaado saamiga kharashka sida todobaadle ah, iyo, iyo deyn bixin, si ay u sii kordhiyaan dakhliga, waa turjumaad waa in ay noqon dib u soo kabashada hufan. qowladda Pachinko, sida dukaamada silsilada badan, laakiin ma aad u badan soo kabashada a xagjirka ah, oo leh awooda dhaqaale waa tii pachinko daran, tii pachinko dheeraad ah ku riday badan oo Xintai waxaa ma Slide waxaa ka soo kabsaday ka dib markii maalmo dhowr bedel Haddii, waxaa sidoo kale waa kiis ay howlgalka ka hor inta aysan faa'iido u dhacayso.
Intaa waxaa dheer, soo saarayaasha qowladda pachinko, urursan inta badan waa in Tokyo prefectures deriska aad leedahay. In the case qowladda pachinko ee badhtamaha magaalada ah, waa qofka macaamiisha ah ee socodka waa si degdeg ah, uma baahnid inaad hesho qasbay in ay soo iibsadaan xaaladaha Xintai heshay badan oo uniform. Taa waxaa ka duwan in ay dhacdo dukaan magaalada hareeraheeda ah, bedelka Xintai noqon doonaa oo ku saabsan nus ka mid ah dukaanka badhtamaha magaalada. Isagoo ka hadlayay sababta, ka duwan qowladda pachinko ee badhtamaha magaalada, iyo xaqiiqda ah in dukaan yar oo ay u tartamaan in xaafadda, macaamiisha waa xarunta joogtada ah, waa qayb ka mid ah in inta badan ma aha dhaqdhaqaaqa badan.
tartamaan sababtoo ah waxaad ka dhigan tahay in dhinaca kale ma joogo, iyo sidoo kale meesha baahida loo qabo in soo bandhigo ee mashiinada cusub ee ugu sareysa si dhaqso ah. Intaa waxaa dheer, si ay u leeyihiin saldhig macaamiisha sidoo kale noqday ganacsi ee xarunta si joogto ah, waxaan u muuqdaan in hordhaca ah ee miiska loo isticmaalo ka badan ugu dambeeyay taagan kor u. Sida of this, laakiin xawaaraha bedelka ee badhtamaha magaalada iyo agagaarkeedii oo tii pachinko aragnay sababta kala duwan, aad uma baahna in ay dib u soo kabashada degdeg ah haddii iibka baanaha la soo bandhigay Xintai.
Xintai inta dukaanka of bedelka waa, Sidaas waxa lahaa in aad samayso, ama set kabashada inay soo bandhigto sariirta ka meermeerayo in ay ku habboon agagaarka sameynayo sababtoo ah iibka kor u bixin, waxaa jira ku dhawaad ??kaliya halkaan ku arko iyada oo loo marayo in daawashada maalmeedka .
waa qiyaasta iibka ee shirkadda, waxa ay u muuqataa in dad badan oo ha noqonin mid horseeda in fikradda ah doorashada makhaayad ku wanaagsan in dhibic ka mid ah aragtida sida, ee ha yar miyir ah. Xintai inta dukaanka of bedelka yahay, Sidaas waxa lahaa in aad samayso, ama set kabashada inay soo bandhigto sariirta ka meermeerayo in ay ku habboon agagaarka sameynayo sababtoo ah iibka kor u bixin, waxaa jira ku dhawaad ??kaliya halkaan ku arko iyada oo loo marayo in daawashada maalin walba.
waa qiyaasta iibka ee shirkadda, waxa ay u muuqataa in dad badan oo ha noqonin mid horseeda in fikradda ah doorashada makhaayad ku wanaagsan in dhibic ka mid ah aragtida sida, ee ha yar miyir ah.